Xubnaha Iswiidhen ku fadhiya baarlamaanka EU oo dhaleeceeyey USA - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xubnaha Iswiidhen ku fadhiya baarlamaanka EU oo dhaleeceeyey USA
La daabacay måndag 1 juli 2013 kl 11.15
Mareykanka oo EU basaasnimo ku dhageystey
Sawirle: Anders Wiklund/Scanpix
Xubno badan oo Iswiidhen ugu jira baarlamaanka Midowga Yurub ayaa caro ka muujiyey wararkii isasa soo tarayey oo ku saabsanaa in wakaaladda sirdoonka Maraykanka oo loo soo gaabiyo NSA ay si qarsoodi ah u dhegeysatey hay’adaha Midowga Yurub.
Christofer Fjellner oo ka tirsan xisbiga Mooderaatka ayaa sheegay in ay arrintani ka fajicisey oo ay noqon karto mid waxyeelo gaarsiisa wadashaqaynta wanaagsan oo ka dhexeysa Midowga Yurub iyo Maraykanka:
- Waa wax xun in Maraykanku basaasid ku sameeyo dalalka Midowga Yurub. Laakiin waxaa hadda noo socda wadahadallo ku saabsan sidaan u wadashaqayn lahayn. Waxaan aamminsan nahay in haddii ay kalsoonidu dhunto ay waxyeelo gaarsiin karto wadashaqayntaas.
Carl Schlyter oo xisbiga Doogga u fadhiya baarlamaanka EU ayaa isna sidaas la qaba. Wuxuuna intaas ku daray in arrintani waqti aad u xun ku soo aaddey maadaama ay hadda Maraykanka iyo Midowga Yurub u socdaan wadahadallo ku saabsan heshiis ganacsi isu furan.
Wargeyska Der Spiegel oo Jarmalka ka soo baxa ayaa baafiyey in wakaaladda sirdoonka Maraykanku aysan dhegeysan oo qura muwaadiniyiinta Midowga Yurub ee ay sidaas oo kale warar qarsoodi ah ka ururin jirtey hay’adaha Midowga Yurub. Wararkaan waxaa laga helay sirtii uu horay u kashifay Edward Snowden oo wargeyska Der Spiegel soo akhristey.